Mareykanka oo ka hadlay go'aankii Gollaha Shacabka | KEYDMEDIA ONLINE
Mareykanka oo ka hadlay go’aankii Gollaha Shacabka
Safaaradda Mareykanka ayaa sidoo kale bogaadisay tallaabada Farmaajo uu qaaday, waxayna ku baaqday in doorashadda si dhaqso loo qabto.
MUQDISHO, Soomaaliya - Safaaradda Mareykanka ayaa qoraal ay soo saartey kusoo dhawaysay go'aankii Gollaha Shacabka ee baabi'iyay muddo-kordhinta Farmaajo.
"Waxaan soo dhawaynaynaa tallaabooyinka ay qaadeen Farmaajo iyo Gollaha Shacabka, waxaan sidoo kale soo dhaweynaynaa kaalinta Ra'iisul Wasaare Rooble ee hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya kuwaasoo ay tahay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto," ayaa lagu yiri qoraalka Safaaradda.
Safaaradda Mareykanka ayaa qoraalkan soo saartay dhowr saacadood kadib markii Gollaha Shacabka Maanta u codeeyay in dib loogu laabto heshiiskii doorashadda Sep 17, islamarkaana ay Xildhibaanada laaleen muddo-korarsiga labada sano ee 12-kii April loo sameeyay Farmaajo.
Dhamaan Xildhibaanadii kulanka soo xaadiray oo 140 gaarayay ayaa u codeeyay dalabka Farmaajo in dib loo soo nooleeyo qaraarkii doorashadda dadban iyo heshiiskii Sep 17, iyadoo dib loo furayo wadahadaladii dowladda iyo Maamulada.
Rooble lama oga inuu geediga loo raray uu ku furi doono halka loo guurey, oo ah doorasho ku saleysan nidaamka 4.5, oo Maamul kasta labo degaan doorasho ka dhacayso, iyadoo ergada laga dhigay 101, halka doorashadii hore ahayd 51.
Farmaajo ayaa hadda wareejiyay maamulkii doorashadda, waxaana laga dalbaday inuu faraha kala baxo arrimaha taliska Ciidanka qaranka, si aysan u dhicin in loo adeegsado dano gaar ah.